linoo-ayar: ဂါထာ မန္တန်
By သစၥာ | သ​စ္စာ on 7:11 PM ဘာသာေရးနှင့်ပတ်သက်၍
ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာေတာ်သည် အကျင့်သာသနာေတာ် ြဖစ်ပါ၏။ အကျင့်စရဏ ြပဋ္ဌာန်းပါ၏။ အရွတ်သာသနာ မဟုတ်ပါ။ ြမတ်စွာဘုရားသည် ေလာကုတ္တရာ အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ သီလ သမာဓိ ပညာ ကျင့်စဉ်များကို ေဟာေဖာ် ညွှန်ြပေတာ်မူခဲ့ပါ၏။ စား၀တ်ေနေရးနှင့်မကင်းေသာ လူ့ေဘာင်ေန လူသားတို့အေနြဖင့် သမ္မာအာဇီ၀ ေဘာင်အတွင်းမှ ေလာကီအကျိုးစီးပွားများကို ေဆာင်ြကဉ်းနိုင်စိမ့်ေသာငှာ သမ္ပဒါတရားေလးပါး၊ သိဂင်္ါေလာ၀ါဒသုတ် စသည့် ကျင့်စဉ်များကို ေဖာ်ညွှန်းလမ်းြပေတာ် မူခဲ့ပါသည်။ ဘုရားရှင် ေဖာ်ညွှန်ြပေတာ်မူေသာ တရားနည်းလမ်းများအတိုင်း ကုိယ်တုိင်ကျင့်ြကံအားထုတ်ြကမှသာလှျင် ေလာကီ ေလာကုတ္တရာ နှစ်ြဖာအကျိုး ပွားတိုးစည်ေ၀နိုင်မည် ြဖစ်ပါ၏။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် အစဉ်အတိုင်း ေလှျာက်ရေသာလမ်းသာ ရိှပါ၏။ မိမိ၏ ကံ ၊ ဉာဏ် ၊ ၀ီရိယစွမ်းအားတို့ြဖင့် ကျင့်ြကံေလှျာက်လှမ်းရေသာ လမ်းေကာင်းလမ်းမှန်သာ ြပဋ္ဌာန်းပါ၏။
ဗုဒ္ဓသာသနာေတာ်ြမတ်အတွင်း ဗုဒ္ဓ၀ါဒ အေယာင်ေဆာင်လျက် ေရာေနှာေနေသာ ၀ါဒများတွင် မန္တရယာန ၀ါဒလည်း ပါသည်။ မန္တရယာန၀ါဒဟူသည် အစွမ်းထက်ေသာ ဂါထာ၊ မန္တန်များကို ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်ြခင်း အားြဖင့် မိမိ၏ အလိုဆန္ဒများ ြပည့်စံု ြပီးေြမာက်သည်ဟူ၍ ယံုြကည်ေသာ၀ါဒ ြဖစ်ပါသည်။ မန္တရ၀ါဒသည် အသံကို အဓိကထား၏။ မန္တန်ကား အသံပင်ြဖစ်၏။ မန္တရ၀ါဒီတို့၏ အလိုအရ မန္တန်ရွတ်ရံုမှျြဖင့် ေလာကီေကာင်းကျိုး အေထွေထွကို ြဖာေ၀ေစ၏။ ေလာကုတ္တရာ အကျိုးစီးပွားကိုလည်း ေပးစွမ်းနိုင်၏။ နတ်ြပည်ကို ေရာက်ေစနိုင်၏။ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို ေရာက်ေစနုိင်၏။ ြပုမိေသာ မေကာင်းကံများ ပေပျာက်၏။ ငရဲကျမည့် ေဘးမှ လွတ်၏ဟူ ယံုြကည်ြကသည်။
ေထရ၀ါဒ၏ အလိုအရမူ ေလာကီအကျိုးစီးပွားကိုလိုေသာ် သမ္မာအာဇီ၀ ေဘာင်၀န်းအတွင်းမှ “ကံ၊ဉာဏ်၊ ၀ီရိယ” တို့ကို ထိထိေရာက်ေရာက် အသံုးချရန်လို၏။ ငရဲကျမည့်ေဘးမှ လွတ်လိုေသာ် ဒုစရိုက်မှုများ ေရှာင်ြကဉ်ဖို့လို၏။ နတ်ြပည်ေရာက်လိုေသာ် ဒါန၊ သီလ၊ စသည့် ေကာင်းမှုတို့ကို ြပုရန်လို၏။ မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန် ရလိုေသာ် သမထ၊ ဘာ၀နာ၊ ၀ိပဿနာ ဘာ၀နာ ပွားများရန်လို၏။ ေထရ၀ါဒနှင့် မန္တရ၀ါဒသည် အေရှ့နှင့် အေနာက်၊ ေတာင်နှင့်ေြမာက်ပမာ ဆန့်ကျင်ေကျာခိုင်းလျက် အလှမ်းအတာ ကွာေ၀းလှပါ၏။
မန္တရ၀ါဒီတို့က ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်လည်း ပရိတ်ြကီး (၁၁)သုတ် စေသာ မန္တန်များ ရိှသည်ဟု ေ၀ဖန်ေထာက်ြပြကပါ၏။ စင်စစ်ေသာ် ပရိတ်ြကီး (၁၁)သုတ်သည် မန္တန်မဟုတ်ပါ။ ြမတ်စွာဘုရားသည် ပရိတ်ေတာ်တို့ကို သတ္တ၀ါတို့၏ ေကာင်းကျိုးချမ်းသာအလို့ငှာ ေဟာြကားေတာ် မူခဲ့ပါသည်။ ပရိတ်ေတာ်များကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ြခင်း၊ နာယူြခင်းတို့ြဖင့် မေကာင်းေသာ ေဘးအန္တရာယ်တို့ကို တားဆီးနိုင်ြပီး ေကာင်းကျိုးချမ်းသာ ကျက်သေရမဂင်္လာအေပါင်းနှင့် ြပည့်စံုသည်ဟု ဗုဒ္ဓ၀ါဒီတို့က ယံုြကည်ြကသည်မှာ မှန်ပါ၏။ သို့တစ်ေစ ပရိတ်ေတာ်တို့ကို ရွတ်သူတိုင်း ေကာင်းကျိုးချမ်းသာ ရေစနိုင်သည်ဟုမူ ြမတ်ဗုဒ္ဓက အာမခံေတာ် မမူပါ။ အတိတ်က အကုသိုလ်ကံ အားြကီးသူများနှင့် ယခုပစ္စုပ္ပန်၌ ြကီးေလးေသာ အြပစ်ကျူးလွန်သူအေနြဖင့်မူ ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ြခင်းအားြဖင့် အကျိုးကို မခံစားရဟု ဆိုပါ၏။ ဤသည်မှာ တရားမှျတ မှန်ကန်ေသာ ကမ္မနိယာမဘက်မှ ခိုင်ြမဲတည့်မတ်စွာ ရပ်တည်ထားြခင်းြဖစ်၏။ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်တို့၏ စွမ်းအင်ကို လျစ်လျူရှု၊ ဥေပက္ခာမြပုြခင်း ြဖစ်၏။ လူ့ေလာကကို ေစာင့်ေရှာက်ေသာ အေတွးအေခါ်လည်း ြဖစ်၏။
ေထရ၀ါဒ၏ ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ြခင်း၊ နာြကားြခင်း စသည်တို့၌ ြဖတ်လမ်း မရိှပါ။ လူြပိန်းြကိုက် မက်လံုး မပါပါ။ ထို့ြပင် ပရိတ်ရွတ်ဖို့သာ လို၏။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ကျင့်စဉ်များကို ကျင့်ဖို့မလိုဟူေသာ အယူအဆကို ထူေထာင်မထားေပ။ ေထရ၀ါဒ၏ ပရိတ်ေတာ်များအေပါ် သေဘာထားပံု၊ ပရိတ်အသံုးြပုပံုနှင့် မန္တရ၀ါဒ၏ မန္တန်အသံုးြပုပံု ၊ မန္တန်အေပါ် သေဘာထားပံုတို့မှာ များစွာ ြခားနားပါ၏။ များစွာ ဆန့်ကျင်ပါ၏။
ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ်လျက် အြမတ်ထုတ် ကိုယ်ကျိုးရှာလိုေသာသူများသည် ေလာကီအကျိုးစီးပွားကို အာသာငမ်းငမ်းြဖင့် ြဖတ်လမ်းက ရှာေဖွလျက်ရိှြကေသာ ေလာဘသားေကာင်များအား ဂါထာမန္တန် ေထာင်ေချာက်အတွင်း ဆွဲသွင်းလျက် ရိှေနြကပါ၏။ စီးပွားတက်လိုေသာ် မည်သည့်ဂါထာမန္တန်ကို ရွတ်၊ အမှုအခင်းနိုင်လိုေသာ် မည်သည့်ဂါထာမန္တန်ကိုရွတ် စသည်ြဖင့် ေထရ၀ါဒ သာသနာထွန်းကားရာ ဤနိုင်ငံတွင် မန္တရ၀ါဒတို့ ြဖန့်ြဖူးေြကာ်ြငာလျက် ရိ်ှပါသည်။ ဤသို့ြဖင့် ြဗဟ္မဏတို့၏ နတ်မင်းြကီးသံုးပါး၏ သေကင်္တြဖစ်ေသာ ဥံု ဥစ္စာစရဏ သမ္ပေန္နာ ဟူ၍ ဘုရားဂုဏ်ေတာ်ကိုပင် ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ နုတ်ပယ်ြခင်း ြပုထားေသာ ဂါထာမန္တန်များကို ဖန်တီးလျက်ရိှေနြကကုန်၏။ ေထရ၀ါဒ အသိအြမင် မရိှသူတို့ကလည်း ထိုသာသနာ ထိုသာသနာပ ဂါထာမန္တန်တို့ကိုပင် တရိှုက်မက်မက် ဦးထိပ်ရွက်လျက် ရိှေနြကကုန်၏။ မိမိ၏ ကံ၊ ဉာဏ်၊ ၀ီရိယကို ရိုးရိုးသားသားအားကိုးယံုြကည်မှု မရိှေတာ့ဘဲ သာသနာပ ဂါထာမန္တန်ကိုသာ အားကိုးရာရှာြခင်းသည် ကံ ကံ၏အကျိုးကို လက်လွှတ်လိုက်ြခင်းပင် ြဖစ်ပါ၏။ ကံ ကံ၏ အကျိုးကို လက်လွှတ်လိုက်သည်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်ေကာင်းတစ်ေယာက် မဟုတ်ေတာ့ပါ။ သာသနာပ ဂါထာမန္တန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဦးထွန်းေအာင်မိုး (ပန်းဘဲတန်း)၏ ေရးသားချက်မှာ များစွာဆင်ြခင်နှလံုးသွင်းစရာ ြဖစ်ပါ၏။ “ြပုလုပ်ေသာ လုပ်ငန်း ေအာင်ြမင်ြခင်း၊ မေအာင်ြမင်ြခင်းသည် မိမိ၏ ကံ၊ ဉာဏ်၊ ၀ီရိယများနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းေအာင်ြမင်ေရး၊ ထီေပါက်ေရး၊ ရာထူးတိုးေရး၊ ချမ်းသာေရး စသည်တို့မှာလည်း မိမိ၏ ကံ၊ သို့မဟုတ် မိမိ၏ ြကိုးစားမှု သို့မဟုတ် မိမိ၏ကံနှင့် ြကိုးစားမှုတို့ေြကာင့်သာ ြဖစ်ေပါ်လာနုိင်ပါသည်။ အြခား တစ်စံုတစ်ေယာက်က စွမ်းေဆာင် မ စ၍ မရနိုင်ပါ။
ြမတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်း မိမိသည်သာလှျင် မိမိ၏ ကိုးကွယ်ရာြဖစ်၏။ သူတစ်ပါးသည် မိမိ၏ ကိုးကွယ်အားထားရာ အဘယ်မှာ ြဖစ်အံ့နည်းဟု ဓမ္မပဒ၌ အထင်အရှား ေဟာြကားေတာ်မူခဲ့သည်။ ရွတ်ဖတ်ရံု၊ ဆုေတာင်းရံုမှျြဖင့် လိုအင်ဆန္ဒြပည့်မည်၊ နိဗ္ဗာန်သို့ ေရာက်နုိင်သည်ဆိုေသာ မက်လံုးမှာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ေြဖာင့်ေြဖာင့်ြကီး ဆန့်ကျင်ေနပါသည်။ ေသချာစွာ စဉ်းစားြကည့်ပါက ထိုမက်လံုးများ အမှန်တကယ် ြဖစ်နုိင်၊ မြဖစ်နိုင်ဆိုသည်ကို သိရိှလာြကေပမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ- ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ် ဆုေတာင်းရံုမှျြဖင့် ေလာကီ၊ ေလာကုတ္တရာ လုိအင်ဆန္ဒမှန်သမှျတို့ ြပည့်စံုမည်ဆိုေသာ မေရရာသည့် မက်လံုးများကို နားမေယာင််ြကရန် ြဖစ်သည်။ မိမိအတွက် အကျိုးတစ်စံုတစ်ရာ မရိှနိုင်ေသာ ဂါထာမန္တန်များကို အချိန်ကုန်ခံ၍ ရွတ်ဆိုမေနြကဘဲ လုပ်သင့် လုပ်ထိုင်သည်များကိုသာ ြပုလုပ်သင့်ြကပါသည်။
လူေတွကလည်း အများအားြဖင့် ြဖတ်လမ်းြဖင့် လာဘ်လာဘကို လိုချင်ြက၏။ ြဖတ်လမ်းြဖင့် ချက်ချင်း ချမ်းသာချင်ြက၏။ ဤအချက်ကို အခွင့်ေကာင်းယူကာ အချို့ေသာ ဂိုဏ်းဆရာတို့သည် အကျိုးအာနိသင်ကို သားရည်ကျေအာင် ေရး၍ မသိသာြဖင့် စီးပွားေရး (လာဘ်လာဘ)အတွက် ဂါထာများကို အသံုးချခဲ့ြက၏။ ေရးသူကလည်း အမှားအမှန် မသိ၊ လာဘ်လာဘအတွက် ေရးခဲ့သည့်အတိုင်း ရွတ်သူကလည်း အမှားအမှန် မသိ ၊ လာဘ်လာဘအတွက် ရွတ်ြကြခင်း ြဖစ်ေလသည်။ ဂိုဏ်းဆရာတို့၏ ဂါထာမန္တန်များမှာ အနက်ေပးလို့ပင် မရေပ။ ပါဋ္ဌိများ စည်းကမ်းမကျ၊ မမှန်သည်ကသာ များေလသည်။ ထင်ရာြမင်ရာ ေပးချင်သလို ေပးမှရသည့် ဂါထာမျိုး ြဖစ်ရံုသာမက ရွတ်ချင်ေအာင် မက်လံုးေပး၍ ထင်ရာြမင်ရာ အနက်အဓိပ္ပါယ် ေရးသားထားသည်များကိုလည်း ေတွ့ရ၏။ ပါဋ္ဌိမမှန်သည့် ဂါထာများကို လာဘ်လာဘအတွက် ရွတ်သူတို့မှာကား အန္တရာယ်ကင်းြခင်း၊ လာဘ်လာဘရွှင်ြခင်း စေသာ အကျိုးကို ဘယ်နည်းနှင့်မှျ ေပးနုိင်မည် မဟုတ်ေပ။
ဂိုဏ်းဆရာတို့ဂါထာြဖင့် လာဘ်လာဘ ရရိှခဲ့ြက၍ အေတာ်အတန် စီးပွားေရးအကွက်၀င်လာေသာ် စာေရးဆရာအချို့နှင့် စာအုပ်ထုတ်ေ၀သူအချို့ကလည်း ထိုဂါထာများကို ခုရွတ် ခုချက်ချင်း ချမ်းသာေတာ့မလိုလို ၊ ဂါထာရွတ်ေနက လိုတာရြပီး အြခားဘာမှျ လုပ်စရာမလိုေတာ့သလိုလို၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်၊ ေနချင်သလိုေန၊ ဂါထာရွတ်ေနက ဘာမှ အန္တရာယ်မြဖစ်နိုင်ေတာ့သလိုလို အကျိုးေတွကို ေဆးေြကာ်ြငာသလို ေ၀ေ၀ဆာဆာနှင့် မက်လံုးေပး ေရးသားထုတ်ေ၀ြကြပန်၏။ မေတာ် မေလျာ် မဟုတ်က ဟုတ်က ဂါထာမန္တန်များကို ေရး၍ပင် စီးပွားရှာြကကုန်၏။
လာဘ်လာဘ စီးပွားေရးအတွက် အသံုးချြခင်း ြဖစ်ေစကာမူ ထိုဂါထာမန္တန်များ၏ အန္တရာယ်မှာ မေသးလှပါေချ။ ဂါထာအတုများေြကာင့် သာသနာပင် ကွယ်သွားနုိင်သည့် အေြခအေနထိ အန္တရာယ် ြကီးမားလှေပသည်။ အဘယ်ေြကာင့်ဆိုေသာ် ေရွှအတု ေပါ်လာြခင်းေြကာင့် ေရွှအစစ် ေပျာက်ကွယ်ရသကဲ့သို့ ဂါထာအတုများေြကာင့် ဘုရားေဟာဂါထာအစစ်များ ေပျာက်ကွယ်သွားနိုင်ပါသည်။
ပါလှျင် ြပီးစတမ်း ။
လံုး၀ မစူးစမ်း ။
ကေလာင် လက်သရမ်း ။
မီးလှျံ စားေသာ့သွမ်း ။
လွန်၏ ကျွံ၏ ငါမသိ
အသိ တစ်ဖက်ကန်း ။
တိကျ အလယ်လမ်း ။
ဉာဏ်ေရာင် အလင်းတန်း ။
လားရာ အပါယ်လမ်း ။
လွှမ်းြခံုသကာ ၊ အဆိပ်စာကို
မုသာ၀ါဒ ၊ တံဆိပ်လှနှင့်
နှင်ေပးဦးေတာ့ အပါယ်လမ်း ။ ။
10 Response to 'ဂါထာ မန္တန်'
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_02.html?showComment=1204535662261#c5341660292911335366'> March 3, 2008 at 1:14 AM
Precious Post . That Totally Right.
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_02.html?showComment=1204537549025#c7884055036535893946'> March 3, 2008 at 1:45 AM
ဒီေန့အဖို့ ကျက်သေရ ရှိသွားဘီ ညီေရ.. အကိုကေတာ့ သံဗုေဒ္ဓ ေတာ်ေတာ်ရွတ်တယ် သိလား ဟီး
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_02.html?showComment=1204538821143#c7787137521477298035'> March 3, 2008 at 2:07 AM
ကိုလင်းဦးေရ အရမ်းတန်ဖိုးြကီးတဲ့ ပို့စ်ပါပဲ။ သာသနာ မေပျာက်ပျက်ဖို့ အတွက်ေရာ၊ အယူမမှားဖို့ အတွက်ေရာ ဒီပို့စ်ေလးက တဖက်တလမ်း အေထာက်အကူ ြပုေစပါတယ်။ ေလးစားလျက်ပါဗျာ။ ေအာက်ဆံုးက ကဗျာေလး ကျွန်ေတာ် ကူးသွားတယ် ခင်ဗျ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_02.html?showComment=1204567121257#c5198234666321702567'> March 3, 2008 at 9:58 AM
ကိုလင်းဦးေရ... ေထရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ အဓွန့်ရှည်ြကာ တည်တန့်ဖို့့ရာအတွက် အမုန်းခံြပီး ေစတနာထားေရးတဲ့
ကိုလင်းဦးြကီး ဒီထက်မက ေကာင်းတဲ့ post ေတွ ေရးနိုင်ပါေစဗျာ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_02.html?showComment=1204587743862#c930466209686267558'> March 3, 2008 at 3:42 PM
ဒီပို.စ်ကို တင်ြပထားတာ ေတာ်ေတာ်ေလးကို ေကာင်းပါတယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_02.html?showComment=1204587743863#c3194273660572480750'> March 3, 2008 at 3:42 PM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_02.html?showComment=1204594601142#c4236883770073612866'> March 3, 2008 at 5:36 PM
အင်း အေရှ.က အကိုေတွ အမေတွ ေြပာသလိုဘဲ.. ပညာရတယ် ။ ေကျးဇူးပါအကိုေရ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_02.html?showComment=1204599277605#c9122249803242208153'> March 3, 2008 at 6:54 PM
စီဗံုးထဲမှာ ေရးမရလို့ ဆက်ေြပာရဦးမယ် bro ၊ ဘာသာေရးကာ ယေန့ေခတ် လူငယ်(ေရးသား သူအပါအ၀င်) များအဘို့ အတန်း ပညာနှင့် ြကည့်လျင် မူြကိုနှင့် မူလတန်းြကား၊ ယေန့ အိုင်တီေခတ် အြမင်နှင့် ြကည့်လျင် windows basis ေတာင် မေအာင့် တေအာင်ချင်၊ ခက်ပါဘိ၊ မိရိုးဖာသာ ဗုဒ္စဘာသာ ၀င်များေပမို့၊ သို့ေသာ် အြခား တစ်ဖက် ဘာသာ၀င်များ ြပုကျင့် ပံုနှင့်ဘာမှျကို မဆိုင်။ သို့ေ၀ဖန် အြကံြပုချက်ကို မေကျနပ် လျင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကျနပ်လျင်ေသာ် လည်းေကာင်း ေအာက်ပါ ဘေလာ့သို့ ေပးပို့ နုိင်ပါသည်။
စာေရးသားသူ ကျွန်ေတာ်အသက် အရွယ် အေတွ့အြကံုနှင့် ြကည့်လျင် အင်မတန်ေလးစား အတုယူေကာင်း ပါေသာ်ြငားလည်း မိရိုးဖာသာဗုဒ္စ ဘာသာအယူအဆ မန္တာန်များအား ြမန်မာဘာသာများ ြဖင့် ေရးသား ထားေသာ်ြငား ဖတ်သူများမှ ယခုပိုစ့်ေရး သားသူ ကျွန်ေတာ်များလို ဆိုရင်ေတာ့ြဖင့် ခပ်ရိုင်းရိုင်း အရူးအမဲသား ေကျွးသလိုပင် ။
(အေပါင်းအသင်းများ နှင့်ေရာင်းရင်းများ ပါ ဖတ်ရှုနုိင်ရန် ကူးယူသွားပါသည်။ ေကျးဇူးအထူး တင်ပါသည်)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_02.html?showComment=1204619353584#c3295448364523777200'> March 4, 2008 at 12:29 AM
ဒါ ေရးသင့်တဲ့ ပိုစ့်ေလး တစ်ခုပဲ လင်းဦးေရ
မဟုတ်ရင် လူေတာ်ေတာ် များများ မသိြကဘူး
ရှိခိုးြပီးရင် ဆုပဲ ေတာင်းတတ်ြကတာ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_02.html?showComment=1204623896891#c1299572492891987854'> March 4, 2008 at 1:44 AM
ကိုလင်းဦး.. ဒီကိစ္စကို ရှင်းြပ ေရးြပေပးတာ ေကျးဇူး အများြကီး တင်ပါတယ်။ မီ့ အတွက်ေတာ့ ေဆွးေနွးဖို့ သိပ်ေလးနက်ပါတယ်။
ဉာဏ်မီသေလာက် ေြပာရရင် . . .
ဂါထာ၊ မန္တန် ရွတ်ဆိုြခင်း ေလ့ကျင့်ြခင်းေတွဟာ အြခား ယံုြကည်မှုတစ်ခုပါ.. ဗုဒ္ဓြပခဲ့တဲ့ လမ်းစဉ်ထဲမှာ မပါပါဘူး။
ဒါေပမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ စတင်ခဲ့တဲ့ ေနရာတ၀ိုက်က ေပါ်ခဲ့တဲ့ ဓေလ့တစ်ခု ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ လွှမ်းမိုးမှုဟာ ဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗာန်ြပုြပီးေနာက် တရားေတာ်ေတွကို သုတ္တံ အေနနဲ့ မှတ်တမ်းြပုခဲ့တဲ့ အထိ ြဖစ်ပါတယ်။
အဲဒီေခတ်က ထွန်းကားတဲ့ စာေပ ကို မှီးြပီး အဆံုးအမေတွကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ မှတ်မိလွယ်ေအာင် ေရးထိုးခဲ့၊ အသံထွက်ေကာင်းေကာင်းနဲ့ နှုတ်တိုက်ကျက်နိုင်ေအာင် ြပုခဲ့ရာကေန မေပျာက်ပျက်ေအာင် ေန့စဉ် ရွတ်ဖို့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ြကိုးစားခဲ့ရာက ဟိုအကျိုး ဒီအကျိုး ရေစတယ် ဆိုြပီး နားလည်မှု လွဲခံခဲ့ရပံုပါပဲ။ (အဲဒီေခတ်က စာရွက်မရှိ၊ ေပရွက် ဆိုတာကလဲ ေပျာက်ပျက်လွယ်တယ်ေလ။)
ပါဠိဘာသာ အသံုးချမှု နည်းလာတဲ့အခါ လိုင်းပူးြပီး လူေတွ ထင်ေယာင်ထင်မှား ြဖစ်မှ အခွင့်အလမ်းရှာရတဲ့ သာသနာရှင်ေယာင်ေတွအတွက် အကွက်ေကာင်းလဲ ြဖစ်လာတယ်။
အဲဒါေတွပါ ေရာေထွးြပီး သတိမမူဘဲ ဂါထာမန္တန် ဆိုတိုင်း ေလာဘတြကီး ရွတ်တယ်ဆိုတာကေတာ့ ေလာဘကို ေမွးေကျွးရာ ေရာက်ပါတယ်။
အခုထိေတာ့ ဒီေလာက်ပဲ သိပါေသးတယ်။